Sun, Jul 5, 2020 at 3:52am
आइसक्रिम खान मन पराउनुहुन्छ ? यस्ता छन् फाइदा र बेफाइदा
काठमाडौं, २८ जेठ गर्मी लागेसँगै बजारमा आइसक्रिम खानेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । विभिन्न किसिमका आइसक्रिम बजारमा सजिलै उपलब्ध हुन्छन्, जो खाँदा स्वादिष्ट पनि हुन्छन् । सामान्यतया दूध, क्रिम, ग्लुकोज, चकलेट आदिको मिश्रणलाई फ्रिज गरेर आइसक्रिम बनाइएको हुन्छ । आइसक्रिममा क्याल्सियम, भिटामिन र प्रोटिनको मात्रा धेरै पाइन्छ । जानौँ, आइसक्रिमका फाइदा/बेफाइदाबारे : फाइदा – आइसक्रिमलाई ऊर्जाको स्रोतको रूपमा लिइन्छ । एउटा सामान्य आइसक्रिममा..
पैसा कमाउन स्वस्थ्य हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ पूँजी बजारलाई योगसँग जोडेर हेरिँदै
खस्यौली, २८ जेठ आजकल पूँजी बजारलाई योगसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । पैसा कमाउन स्वस्थ्य हुनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा शेयर बजारलाई योगसँग जोडिएको पूँजी बजारका लगानीकर्ताले बताएका छन् । “बजारले केहीमा तनाव सिर्जना भएको र केहीको मृत्युसमेत भएकाले बजारमा छिर्नुअघि ‘मेडिटेशन’ र योगसँगको निकटता बढ्न थालेको छ”, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक फुलप्रसाद सुवेदीले भन्नुभयो । सफल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सहकार्यमा सफल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले..
वरिष्ठ डाक्टर भगवान कोइरालाको जीवनउपयोगी सुझाव
काठमाडौँ, २८ जेठ । सहरमा धुवाँ धुलो, प्रदूषण भएको सबैमा ज्ञान छ । आफू रोगी बन्दै गएको पनि थाहा छ । खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा बहस गरिरहेका हुन्छौँ । तर, आफैँमा लागू गर्दैनौँ । जुन सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । सहरमा हरेक ठाँउमा स्वास्थ्य संस्था सजिलै उपलब्ध छन् । तर, बिरामी नभई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जाँदैनौँ । चिकित्सकको सल्लाह एकदमै थोरैले..
“मनसुन प्रवेशका लागि स्थानीय हावाभन्दा मनसुनी हावाको प्रभाव बढी हुनुपर्छ”
काठमाडौँ, २७ जेठ । यस वर्ष मनसुन एक साता ढिलो भित्रिने भएको छ । नेपालमा मनसुन सोमबार अर्थात जुन १० का दिन भित्रिनुपर्नेमा एकसाता ढिलो गरी भित्रिने भएको महाशाखाका मौसमविद् मीनकुमार आर्यालले बताउनुभयो । “मनसुन भित्रिनका लागि जुन खालको वातवरण हुनुपर्ने हो त्यो बनिसकेको छैन विस्तारै बन्ने क्रममा छ ।” उहाँले भन्नुभयो । मनसुन प्रवेश गर्नका लागि स्थानीय हावाभन्दा पनि मनसुनी हावाको..
१ सय १५ घरपरिवारलाई लक्षित रसुवाघाट–कालापानी खानेपानी आयोजना अन्तिम चरणमा
खोटाङ, २७ जेठ पम्पिङ प्रविधि अपनाइएको खोटेहाङ गाउँपालिका–९ लिच्कीराम्चेस्थित रसुवाघाट–कालापानी खानेपानी आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुनकोशी नदीको पानी लिच्कीराम्चेको कालापानीमा लिफ्ट गरेर गाउँमा पानी वितरण गर्न सो आयोजना शुरु गरिएको होे । कालापानीमा सञ्चालित आयोजनामा भौतिक निर्माणको सबै काम सकेर अहिले विद्युत् जडानको काम भइरहेको निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर राउतले बताउनुभयो । “नदी किनारमा पम्प हाउस र पानी..
आज देशको पूर्वी भागमा हावाहुरीको सम्भावना, आगामी ३ दिनसम्म बदली
काठमाडौं, २६ जेठ । आईतबार राति देशका पूर्वी तथा मध्य भूभाग लगायत पश्चिमी पहाडी भूभागहरुमा सामान्य वदली रहने र बाँकी भागहरुमा आंशिक वदली रहने तथा देशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको बुलेटिनमा उल्लेख छ । आईतबार दिउँसो देशका पूर्वी तथा मध्य भूभाग लगायत पश्चिमी पहाडी भूभागहरुमा सामान्य वदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको हो..
पुख्र्यौली पेशा सङ्कटमा : आरन चलिरह्यो, जीवन चल्न मुस्किल
दमौली, २४ जेठ तनहुँको भानु नगरपालिका–५ मैवलका दलसिं विक आरन पेशा सङ्कटमा परेपछि चिन्तित हुनुभएको छ । पुख्र्यौली पेशाका रुपमा आरनबाट परिवार पाल्न नसक्ने स्थिति आएपछि विक चिन्तित हुनुभएको हो । पुर्खादेखि गर्दै आएको आरन पेशाले परिवार पाल्न गाह्रो भएपछि पेशाबाट नै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । लामो समयदेखि हँसिया, खुर्पा, बञ्चरो बनाएर परिवार पाल्दै आउनुभएका विकले बजारमा आएको आधुनिक सामग्रीका कारण..
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि योजना छनोट, सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित
दमौली, २३ जेठ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनाका लागि तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले योजना छनोट गरेको छ । नगरपालिकाले १२ वटै वडामा बेरोजगारलाई काममा खटाउन विभिन्न योजना छनोट गरेको हो । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका रोजगार सेवा केन्द्र प्रमुख प्रतिभा जिसीले पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ बमोजिम मोटरमार्ग, नाला, सिँढी, पाइप विस्तार, कुलो मर्मत लगायतका योजना छनोट गरिएको जानकारी दिनुभयो..
पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार, पूर्वका ४ जिल्ला प्रभावित
भद्रपुर, २३ जेठ । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएपछि पूर्वका चार जिल्लाका स्थानीयवासी प्रभावित भएका छन् । नेपालले आयात गर्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थ भारतीय भन्सारले अनलाइन इन्ट्री प्रणाली लागू गर्ने नाममा पानीट्याङ्की नाकामा रोकेपछि झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा एक हप्तादेखि पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको हो । झापाको चारआलीस्थित नेपाल आयल निगमको डिपोले भारतको सिलिगुढीबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दै आएको थियो । तर पानीट्याङ्कीस्थित..
छोरा जन्माउने आसमा ७ छोरी ! बुवा भन्छन् - यो छोरो रहेन भने म पनि रहनेछैन
सिञ्जा, २३ जेठ । जुम्लाको तिला गुफा नगरपालिकाका ६२ वर्षीय भक्तबहादुर बोगटी जुम्लास्थित कर्णाली प्रतिष्ठान अस्पतालमा पाँच वर्षीय छोरा विशाल बोगटीको उपचारमा हुनुहुन्छ । घरनजिकैको स्कूल जाँदै गर्दा बाटोमा जङ्गली फल मचैनो खाँदा बिरामी भएका छोराको स्वास्थ्य अवस्था निकै चिन्ताजनक भएपछि उहाँ अस्पताल आइपुग्नुभयो । अस्पतालमा उहाँले भन्नुभयो, “यो मेरो एक्लो छोरा हो । जसरी पनि बचाइदिनुुस् डाक्टर’साब । यो छोरो..
अतिविपन्न दलित समुदायको आवास कार्यक्रम अलपत्र
लहान, २३ जेठ । सरकारले अतिविपन्न दलित परिवारलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम सिरहा र सप्तरीमा अलपत्र परेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायको ढिलासुस्तीका कारण कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । कार्यक्रम अलपत्र हुदाँ नयाँ घर पाउने आसमा पुरानो घर भत्काएर बसेका सिरहा र सप्तरीका अतिविपन्न दलित समुदाय समस्यामा परेका छन् । नयाँ घर पाउँछु भन्ने आशामा घर भत्काएको दुई वर्ष..
Results 759: You are at page 12 of 26